Khatarta telefoonka iyo dhagaysiga dowlada | Somaliska
Af-Soomaali / Teknoolajiyada
Khatarta telefoonka iyo dhagaysiga dowlada
Maraykanka ayaa waxaa isbuucaan ka bilowday maxkamadaynta labo haween Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay in ay taageero siiyeen ururka Al-shabaab. Haweenkaan oo ka shaqeyn jiray haydaha gargaarka ayaa lagu eedeeyay in ay lacago u ururiyeen xarakada Al-shabaab oo maraykanku u aqoonsanyahay urur argagixiso.
Kiiska lagu haysato dumarkaan ayaa intiisa badan waxaa cadeyn looga dhigay cajalad laga duubay telefoonka ay kula hadli jireen dadka ay la xiriiraan iyadoo la soo bandhigay in ka badan 30,000 oo ah wadasheekeysigii ay telefoonka ku sameeyeen oo mudo 1 sano ah ay FBI-da maraykanku dhageysanaysay.
Hadaba qatarta ugu weyn oo dad badani aysan fahansaneyn ayaa ah dhibaatada telefoonka. Wadankaan aan ku noolnahay ee Sweden ayaa sidoo kale Al-shabaab u aqoonsan urur argagixiso iyadoo ay ahayd bilowgii sanadkaan markii labo wiil oo Soomaali ah kuwaasoo lagu eedeeyay in ay Alshabaab ka tirsanaayeen xabsiga laga daayay markii cadeyn lagu waayay balse kiiskooda ayaa sidoo kale waxaa cadeyn looga dhigay telefoonkooda oo la dhagaystay. Hay’ada Amaanka Sweden (Säpo) ayaa soo bandhigtay dhageysiga wiilashaan iyagoo fasax u haysta in ay dhagaystaan telefoonada dadka ay ka shakiyaan.
Säpo ayaa lagu yaqaanaa in ay dhageystaan telefoonka cidkasta oo ay u arkaan in tuhun soo galo iyadoo ay ahayd December sanadkii hore markii Stockholm qaraxa ka dhacay waqtigaasoo ay Säpo dhageysteen dhamaan telefoonada dadka ku nool Stockholm mudo 24 saac ah.
Hadaba waxaa muhiim ah dadka Soomaalida ah ee ku nool qurbaha in ay ka digtoonaadaan khatarta uu leeyahay telefoonka iyo internetka. Waxaa muhiim ah in la ogaato xitaa haddii aadan wax isku ogeyn in ay muhiim tahay in aadan waxkasta ku dhex oran telefoonka. Sidoo kale waxaa la mid ah waxyaabaha aad emailka ku dirto iyo xitaa akhbaaraha aad Facebook ku qorto.
Shirka (muctamarka) 18-aad ee Ururada Skaandaneefiyanka 2010 Stockholm
Kulan ku saabsan arimaha mideynta qoysaska oo ka dhacaya Stockholm
asc jimcale wad kumahadsantahay wanada aad inoo soqortay wana arin jirto thanks bro
Argigixiso….Argigixiso ayaa dhagteena dhibtay Muslim iyo gaal, Diinta Islaamka waa diin aan is badal laheyn ee waxa is badalka ku dhacay wa qofka Muslimka ah.
Diinteena Islaamka waa Naxeeso waa naseexo waa naxeeso….yaa aduunka u sheego sidaas.
Hooyooyinkaas Alle ha u gargaaro, duco ayee iga mudanyihiin, maybe in qalad laga aaminay,
how ever…..Brother Jimcaale mahadsanid digniinta aad naga siisay telka iyo netka.
Muslim waa kuma:
Waa mid ka Amaan galiyay gacantiisa iyo carabkiisa dadka.
waana sidaas sida uu dhahay Nabigeena csw
October 20, 2011 at 12:29
Mahadsanid Ustaad Jimcaale :, Xaqiiqatan waa arin waayahaan Murugadeedo Taagneed Gabdhahaa Muslimaadka ah ee dhankii la doono loo jiidanaayo , oo Nimanka ka Ajnabiga ah ku xadgubeen , oo xitaa Musqulihii Xabsiga Kaamira loogo Xiray .
Argagaxiso ka wayn ma jirto iyaga ayaa kala geeyay Hooyo iyo ilmaheed , iyo Say iyo Sawjadii….. Argagax miyaysan taa ahayn…?
Muslimiinya Gaar ahaan Soomaalida Allaha dhibka ka saaro Aamin..
October 20, 2011 at 16:15
Asc waxaan ku weydiiyey walaal Jimcaale websiteyada ra,yiga laga dhiibtana ka waran kaasi ma amaanbaa sida Somaliska.com waxaa dhacday mar mar in qalad naga dhaco ileyn insaanbaan nahee ka waran ma amaanbaa ra,yiga laga dhiibto Somaliska.com qaladba ha noqdee ra,yigaasi iyo kuwii la mid ah Asc
October 20, 2011 at 21:01
Wsc, waa run waxyaabaha websiteyada lagu qoro qatar ayay noqon karaan balse waxay ku xirantahay waxa uu qofku qorayao…Fikradaha ay dadku ku reebaan Somaliska wax dhibaato ah ma leh balse waxaa laga hadlayaa waxyaabaha waaweynka ah sida qorshayaasha cidii dooneysa in ay faldambiyeed geysato oo internetka ku qorta.
October 21, 2011 at 01:23
ninkii wax isku og ayee dhibee,anigaba ufasaxaya hadhagestan tel keyga xiligaan doonaan xaq bey uleeyihin inay qaab walba uga hortagaan qataraha amaan ka dalkooda,saas u fahma
October 21, 2011 at 07:27
Mahadsanid Jimcaale jawaabtaada walaal.
October 22, 2011 at 18:42
ASC Dhamaan walaalaha Akhrista somaliska, Hadii aan u gudo galo Arintan ka dhacday Magaalada Mineapolis ee Dalka Mareykanka, Waa wax aad Qatar u ah, oo labada dumar u keenay Xabsi aad u weyn oo lagu xukumay 16 sano iyo 18 sano, Runtii waa xabsi dheer waxaana la hor keenay cadeymo cad oo aysan inkiri kari.Runtii waxaan Walaaha Soomaaliyeed ku waaninayaa in laga fogaado waxyaabaha dhibaatada keenaaya oo aan anaga caado u maleyno. Wadan waliba sharcigiisa ayuu leeyahay, Laakiin waxa ay ka siman yihiin waa la dagaalanka Argagixisada. Waad og tihiin diinteena qaaliga ah ma ogola in dad la galaafto ama la dilo. Ilaaheey ha naga wada koriya wixii aan dhiig ku geli lahay, Awlaadana Alaha ku Amaansado Aduunkan dhibkiisa wuu iska badan yahay. Raali ahaada hadii aan idinka qaldamay.
October 22, 2011 at 23:11
asc dhamaan somalida hadaan guda galo arinta lasheegayo .hadeycadahay ina lamapashiiyay cudkeeda cida eylahadleyday iyo waxeykahadleyday odhan eey intaaso eyjiraan .weeykusax santahay dowlada makeykanko sababtoo eh waxa yaraanayo dadka inta dadka aan apoonta ween ulaheen diinta ina lalumiyo .anugu waxanba leyahay si aad ah haloodhageeyto xataa kajooga wadan soomaali halasiidabagalo siloo ugaado dadka sowacayo taaso waxay kujurtaa ciyaalka joga wadamanka yurub odhan pofne dabi oow laheen laguma soo oogayo eha uarkinaha inlaga paldanyay weykusax santahay dowlada laakin marka pof dabilagosoo ogayo waa ina lahelaa cadeyma lamid ah tin hada okalaa